Umkhuleko wokuthi angicabange. ? Imini nobusuku [ne-Return]
Umkhuleko ongicabanga ngami. Siphila nesidingo sokuzizwa sithandwa futhi sifiswa, lokhu, ngokwezinga elithile, kuvamile. Ukwesaba ukwenqatshwa kwandise lesi sidingo futhi kuvame ukuzithola sesisesimweni sokufuna abanye umkhuleko ngakho-ke cabanga ngami Imini nobusuku, ubuye uzongishayela ucingo.
Lokhu kufana nesilinganiso sokuphelelwa yithemba kakhulu kepha akukho okunye okuvela eqinisweni.
Imikhuleko iyisikhali sethu esinamandla kakhulu ngokomoya, ngakho-ke akufanele singabaze ngayo futhi siyisebenzise ngaso sonke isikhathi lapho sihlangabezana nanoma yisiphi isidingo, noma singaba sína kangakanani.
Umkhuleko uzohlala uyikhambi futhi lokhu kusebenza kuzo zonke izici zempilo yethu.
Kunokwehlukaniswa okusemthethweni kwakho konke futhi kuleli cala elithile kukhona okusebenzayo okulinganayo futhi okunamandla kunezinye.
1 Ngabe umkhuleko ocabanga ngami uzosebenza?
1.1 Umkhuleko ekufeni okungcwele ucabange ngami
1.2 Sikhulekele ukuthi ungicabange njengamanje
1.3 Umkhuleko wokungifuna ngenkani
1.4 Umkhuleko ongicabanga ngami bese ubuya
2 Ngingasho imisho emi-3?
Ngabe umkhuleko ocabanga ngami uzosebenza?
Yonke imisho efakwe kule ndatshana ihlolwe futhi inobufakazi obunamandla bempumelelo.
Zonke zinamandla amakhulu futhi zinamandla amakhulu.
Uma ubakhuleka bonke benokholo olukhulu futhi uma uswele, ungaqiniseka ukuthi bazosebenza.
UNkulunkulu nabanye abangcwele basiza labo abadinga ngempela. Uma uswele mane nje cela usizo lukaNkulunkulu.
Kuzokukwenza ucabange ngawe, kukwenze uthande, ufune futhi uphelelwe yithemba, usuku lonke, imini nobusuku, ngaso sonke isikhathi.
Ngokuya (yisho igama lomuntu) emizweni yami nasemzimbeni wami, emiqondweni nasemphefumulweni womuntu walowo muntu, eze kimi Ubusuku nemini kungakhathalekile ukuthi yiziphi izimo ozoba nazo eceleni kwami.
Ngiyakucela, egameni likaSanta Muerte Lady ngicela unginike amandla nokulawula okuphelele, ukuze ngibe naloyo muntu eceleni kwami, ngicela ukuthi unginakekele njalo, futhi ungalokothi uyeke ukufeza zonke lezo zinto ezinhle engizicela kuwe.
Kuze kube lapho uyifuna, ngiyakucela ukuthi ungihambise lapho ngikhona. Ngikubiza, ungangilahli futhi ngicela ungangilahli.
Ukwenza uthando lungicabange ngenye into kunzima kancane.
Kungakho kufanele sithandaze kothile onamandla futhi namandla amaningi othandweni.
ISanta Muerte yibhizinisi elilungile ukukwenza
Sikhulekele ukuthi ungicabange njengamanje
Ngisondela kuwe ukuze ukhulule inhliziyo yami futhi upholise amanxeba ami.Wena obukade usondelene nabaphezulu futhi umemezela uthando el mundo Ngicela ungikhulumele, ngicela usizo nomusa wakho Hawu iNgelosi yami enkulu!
Ngisize ukuba ngiqede ukulambela kwami ​​uthando, ngisize ukuba wakhe izibopho ezingokomzwelo nezangempela. (Yenza igama lesithandwa) ukusondela kimi ngamehlo othando olumsulwa.
Lalelani izicelo zenhliziyo yami futhi ungangilahli kule Ngilosi yothando elindile, inkosana yezulu.
Wena owufanele uthando laphezulu, funa ukuthula enhliziyweni yami Ungigcwalise ngenelise ukujabula ngalomuntu engithandane naye. Ngiyazi ukuthi ubuhle bakho buzothinta inhliziyo yakho uze kimi, njengenceku kaNkulunkulu ukuthi sobabili , uzokwenza isimangaliso.
uthando lwakho infinito ingelosi yami enkulu, ubukhulu bakho buyangigcwalisa futhi ukubonga kwami ​​kuzoba okuphakade. Thinta inhliziyo yakhe uzophilisa eyami khona manjalo.
Sengathi ubuhle bungaba nami nothando lwakho malube nomhlaba, Amen!
Kulokhu, sizobona imiphumela yomkhuleko ngokushesha noma ngabe singakwazi ukukuqinisekisa futhi le yinto enamandla ngalo mkhuleko, okusimema ukuthi sikholwe ukuthi isimangaliso senziwe yize singawuboni umphumela uqobo.
Abanye babamba inkolelo yokuthi thandaza noma ubuze ngenhloso yokulawula izifiso noma imicabango kwabanye abantu isenzo sobugovu kithi, kepha abanye bakholelwa ukuthi kuyisenzo sothando nokuthi kunamaphuzu amaningi wokubukwa.
Isibonelo kulezo zimo lapho ukuqhosha kuxhumene khona futhi kuvumela umuntu ongengalo yakhe ukuba asonteke, khona-ke omunye walo mthandazo onamandla wokuba othandekayo wami angicabange angaba wusizo olukhulu, kepha akukhona ukuthi sizolimaza kuwo wonke umuntu bese ngomkhuleko sizozama ukwenza ukufiphala ne-akhawunti entsha.
Inhloso ukudala isidingo sendlela engenzeka, hhayi ukugoba omunye umuntu ukuthi athathe isinqumo futhi enze engikufunayo.
Umkhuleko wokungifuna ngenkani
“Ngibheke manje, ngalesi sikhathi esichazayo (usho igama lomuntu) ngifuna ungifune, noma ngabe ukuphi.
Nkosi, kusukela kulo mzuzu ngicela ukuthi (igama lomuntu) ubeke imicabango yakho kimi kuphela, ukuthi angikwazi ukucabanga okunye ngaphandle kwami, ukuthi okuhlangene kwakho kuphela kunikelwe kimi.
Ukuthi ngale ndlela ngiyaqonda ukuthi uyangidinga empilweni yakho nokuthi akufanele uchithe olunye usuku ngaphandle kothando lwami. Yenza lo mzuzu (igama lomuntu) ukhohlwe ukuziqhenya kwakho, ungishayele ucingo, ungifune ngokulangazelela futhi ufuna ukuba nami eceleni kwakho izinsuku zakho zonke.
Ngamandla kaNkulunkulu, ngincenga izingelosi zakhe ezintathu. IMIGUEL, i-RAFAEL, ne-GABRIEL, ukuze babeke izandla zabo (igama lomuntu) futhi bangakwazi ukuphuma okwesibili emiqondweni yabo.
Sengathi inhliziyo yakhe, umzimba, umphefumulo nomoya kungokwami ​​ngedwa futhi kungami kuphela, ukuthi kuphela ocabanga ngami futhi ongifisayo, ukuze ahlanze bonke labo abafisa ukusondela kokubi ngamabomu.
Ngegama likaJesu, amen. ”
Umkhuleko usebenza zonke izidingo esingaba nazo njengabantu futhi uzizwe ufunwa kuze kube sezingeni lokuphelelwa yithemba, imvamisa, yisidingo esizama ukusanelisa ngaso sonke isikhathi.
Thandaza ucele ukuthi omunye umuntu, lo mbhangqwana wamanje, noma omunye osanda kungishiya, azizwe sengathi ufuna thina yiyona ndlela engcono yokukuvumbulula.
Kunconywa kakhulu thandaza ubheke lowo muntu futhi uzichaze ekwenqatshweni okubuhlungu.
Imikhuleko ingaba ngaphezu kwamagama, konke kusekholweni lapho sithandaza ngakho.
Umkhuleko ongicabanga ngami bese ubuya
“Emandleni amakhulu kaNkulunkulu, ngikucela umoya wokuphelelwa yithemba, umoya wokubusa, ongakhululekile.
Ngikucela ukuthi ungisize ngibuse (igama lomuntu) futhi ngilawule izinzwa zabo ezi-5, ukuze ngale ndlela ngikwazi ukuphuma emiqondweni yabo umzuzwana.
Ngiyakucela, ukuze ube ngumhlahlandlela wami kule ndlela engifisa ukuhamba ngayo, ukuze (igama lomuntu) ingeyami kuphela, ukuze uhambise kude nabo bonke abafisa ukusondela ngezinhloso ezedlula ubungane noma abafisa umsuse kimi
Ngikucenga, ukuthi ube ngumcabango wakho wodwa phakathi nobusuku nobusuku, ukuze ufune ukungilungiselela futhi ube nami.
Ngegama lakho, moya omkhulu. Ameni. ”
Ukucela usizo olungokomoya lokuthola ukubuyiselwa komuntu osishiyile kuwumkhuba osuqhubeke iminyaka eminingi.
Bambiza la umthandazo wokuphelelwa yithemba futhi kunamandla amakhulu kunendlela ocabanga ngayo.
Lemikhuleko ingenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, okufanele ugcine engqondweni yilokho okukufuna ngempela.
Njengoba umthandazo kufanele wenziwe ngemibono ecacile yokugwema ukucela okuthile esingakufuni nakancane.
Ngingasho imisho emi-3?
Abantu abaningi abazi ukuthi bangakwazi yini ukuthandaza ngaphezu koyedwa umkhuleko. Kulokhu, singasho ukuthi yebo.
Thandaza yonke imikhuleko oyifunayo, kodwa yenze kuphela ngezinsuku ezahlukahlukene.
Ungalokothi uthandaze ngenjongo efanayo ngosuku olufanayo.
Zama ukushiya isikhala sosuku olungu-1 phakathi komkhuleko ngamunye ukucabanga ngami futhi ungiphuphe usuku lonke namanje.
Ukukholwa kuyinto ebaluleke kakhulu kuyo yonke imithandazo. Uma unokholo futhi uthandaza njalo ukukholelwa ukuthi konke kuzothatheka, yonke imithandazo izosebenza.